Apple inoregedza iyo iPhone X, iPhone 6s, iPhone SE uye Apple Tarisa Edition | Ndinobva mac
Maawa mashoma pamberi pekuratidzwa kwepamutemo kwemhando nyowani dze iPhone, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani inovhara iyo Apple Chitoro Pamhepo, kuitira kuti kusvika maminetsi mashoma mushure mekuratidzira kwapera, hatigone kutarisa chii chave chiri shanduko mukatalog yekambani, kunyanya pakati pemidziyo yanga iri pamusika kureba.
Sezvaitarisirwa, uye nekuona yakafara katarogu yematemu ayo Apple aakatengesa mukati megore rapfuura, gore rino yaive yekuvandudza. Zviteshi izvo zvakanyangarika kubva kuApple catalog ndizvo iPhone X, iPhone SE, iPhone 6s, uye iyo Apple Watch Edition.
Kuona nhau idzo iPhone XS inotipa tichienzanisa nechizvarwa chakapfuura, zvine musoro pasi rose kuti Apple yakafunga kuibvisa kubva kubhuku rayo, sezvo ichimanikidzwa kudzikisa mutengo wayo, vanhu vazhinji vanoenda kune iyo modhi, kunyangwe kana yanga iri pamusika kwegore. Iko kutsakatika kweiyo iPhone SE, kunokwevera kutarisa nekuti nhamba huru yeguhwa yakanga yaburitswa ichitaura izvozvo chizvarwa chechipiri cheichi chinongedzo chaive choda kuratidzwa.
Nekutanga kweApple Watch Series 4, Apple yakafunga kusiya zvachose uye bvisa iyo Apple Watch Edition renji, huwandu hwakasvika pamusika nechizvarwa chekutanga cheApple Watch, uye icho chakatipa mhando dzakagadzirwa ne18 k yegoridhe iyo yaitanga pamadhora zviuru gumi. Muna 10.000, kana mhando dzakagadzirwa negoridhe dzainge dzanyangarika kubva kuApple catalog, iyo Cupertino-based kambani yakayedza zvakare ndokutanga modhi yakagadzirwa nekriamic, nemukati mumwe chete watingawana muApple Watch Series 2016. Mutengo weiyo yakachipa pashiri vhezheni, 2mm, yakatanga pa38 euros, nepo iyo 1.459mm modhi yakaderedzwa pamazana 42 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoregedza iPhone X, iPhone 6s, iPhone SE, uye Apple Watch Edition
Hapana chiratidzo cheAirPods uye kwete iyo AirPower
Vhidhiyo yechinyorwa chanezuro chave kuwanikwa kana iwe ukachirasa